Dir Era: Bayaan ay BIREM kasoo saareen Muqdisho.
Bayaan ay BIREM kasoo saareen Muqdisho.
Dhaqdhaqaaqa wax iska caabinta Biimaal(BIREM) wuxuu caddeynayaa in weerarkii lagu qaaday saldhigga booliska ee Marka habeenimadii talaadada soo geleysay ee ku beegneyd 20kii Maarso,saacaddu markii ay aheyd 7:30 daqiiqo ee fiidnimo,( saacadda Marka),uu ahaa mid ay fuliyeen ciidamada BIREM ee Aagga 3aad,wuxuuna ka mid ahaa howl-gallada qorsheysan ee looga xoreynayo deegaanka, burcadka Indhacadde iyo xulufadiisa, loona soo celinayo sharaftii iyo karaamadii umadda,si ay uga tashadaan aayahooda.
Dilka,silcinta,kufsiga,dhaca iyo caga jugleynta ee ay ciidamada Indhacadde kula kacaan dadka deegaanka,marna ma hakineyso halganka BIREM ay ugu jiraan xoreynta deegaankooda,weliba waxay sare u qaadeysaa siina adkeyneysaa niyadda halgamayaasha.
Indhacadde inuusan laheyn damiir banii'aadanimo,waxaa idiin caddeynaya sidii uu u dilay ninka lagu magacaabo Xasan Abow oo u dhashay beesha Biimaal.
Xasan Abow oo bishaan 12dii laga soo qabtay tuulada Sagaaroole ayaan la geynin xabsi ku sheegyada Indhacadde,waxaana lagu hayay meel qarsoon oo ka tirsan magaalada Shalambood,waxaana meydkiisa lagu soo tuuray 18kii bishaan inta u dhexeysa Buufow iyo Ceel-wareegow,isagoo gacmaha iyo lugaha ka xir xiran afkana ay sharooto kaga dheggantahay.
waxaana jirkiisa ka muuqanayay dhaawacyo gugubid iyo raadad garaacid ah oo ay u badantahay 6dii casho ee ay hayeen la jir-dilaayay,kadibna uu u naf baxay sidii loo garaacaayay.
Sidoo kale,Indhacadde in uusan u naxyn qaraabo iyo xigaalo waxaa idiin caddeynaya dilkii ay ciidamdiisu u geysteen 19kii bishaan Maarso nin ganacsade ah oo la oran jiray Warsame Gaab ayna isku heyb yihiin,kaasoo isagoo ku sugan tuulada Mustaqbal ee K/waareey ay ciidamadiisu weydiiyeen canshuur in uu ka bixiyo dibiyo uu horey usoo gatay,ka dibna markii uu dood ka keenay ay baas ku fureen sida uu Indhacadde ku amaray.
Maraxuumkaas ayaa dadkii yaqaanay waxay sheegeen in uu ahaa nin ganacsade xalaal quute ah isla mar ahaantaasna necbaa xadgudubyada ay ku kacaan ciidamada Indhacadde.
BIREM waxay cambaareyneysaa falalka xadgudubyada ah ee ka dhanka ah banii'aadinimada ee uu caadeystay Indhacadde una geystaan dadka gobolka,waxaana u soo jeedineynaa in uu faraha kala baxo howlaha amar ku taagleynta ah ee uu halkaas ka wado.
Ugu dambeyntii waxaan cid walba u cadeyneynaa in BIREM si isdabajoog ah ay howlgalo uga fulineyso gobolka Sh/hoose ilaa ay ka gaarto ujeeddooyinkkooda
Halgan - Adkeysi - Guul.
Maxamed Cusmaan YaraasAfhayeenka BIREM ee uk- londonE-MAIL ADREES lix_mooro@hotmail.co.uktel no 00447944849308 .
Afhayeenka BIREM ee Muqdisho Xaaji Ibraahim Cali (Garuun ).
C/jabar Axmed Xuseen jabtifow@gmail.com
Xafiiska Shabakada Jammaame
# posted by Dir Era @ 4:13 AM